Bayern Munich Oo Ka Farxisay Liverpool, Xiddigii Uu Klopp Raadinayey Oo Waxa Qalbigiisa Ku Jiray La Ogaaday Iyo Reds Oo Saxeexa Ugu Horreeya Sii Ishaaqsatay - Gool24.Net
Bayern Munich Oo Ka Farxisay Liverpool, Xiddigii Uu Klopp Raadinayey Oo Waxa Qalbigiisa Ku Jiray La Ogaaday Iyo Reds Oo Saxeexa Ugu Horreeya Sii Ishaaqsatay
August 7, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Liverpool ayaa war farxad leh ka maqashay afka tababaraha Bayern Munich ee Hansi Flick, waxaanu u sheegay in xiddiga ay raadinayaan ee Thiago Alcantara uu doonayo inuu tago Anfield.
Alcanta oo qiimihiisa lagu sheegay £30 milyan oo Gini ayaa lala xidhiidhinayaa Liverpool, iyadoo uu tababare Jurgen Klopp taageere weyn u yahay kubbad sameeyahan reer Spain oo uu qalqaalo ugu jiro sidii uu u keeni lahaa kooxdiisa.
Thiago ayaa iska diiday inuu heshiiska u kordhiyo Bayern Munich, waxaanu u caddeeyey inuu doonayo inuu baxo oo uu tago horyaal cusub iyo loollan cusub, taas oo ah wixii ay Liverpool doonaysay inay maqasho.
Tababare Flick ayaa xaqiijiyey in Thiago Alcantara ay qalbigiisa ku jirto inuu tago horyaalka Premier League, waxaanu yidhi: “Anigu waan fahmi karaa marka uu ciyaartoy walaac haysto. Thiago wuxuu Spain uga soo ciyaaray FC Barcelona, horyaalka Budesliga na wuxuu u ciyaaray FC Bayern Munich.
“Haddii uu doonayo inuu isku dayo horyaalka Premier League hadda, anigu gebi ahaanba waan fahmayaa. Laakiin waxay noqon doontaa ceeb sababtoo ah Thiago wax buu ciyaartayada kusoo kordhiyaa. Waa taa sababta aan u jecelahay inaan tababare ugu sii ahaado kooxda sannadaha soo socda, laakiin nolosha ayaa sidaas ah. Waana la soconayaa.”
Tababare Flick ayaa la weydiiyey haddii saddexlayda koobabka ah oo ay ku guuleystaan uu Thiago ku dareemi lahaa dhiirigelin dheeraad ah ka hor inta aanu tegin, waxa uu ku jawaabay: “Dareenkani wuxuu iigu jiraa xubin kasta oo ka tirsan kooxda. Kaddib labadii koob ee aanu ku guuleysanay, qof walba wuxuu dhab ahaan u kulul yahay, una heellan yahay inuu wax walba kooxda u huro toddobaadyada yar ee soo socda.”
Flick waxa uu qiray in Agaasimaha kubadda cagta ee Bayern Munich ee Hasan Salihamidzic ay gorfeeyeen sidii ay kooxda u keeni lahaayeen beddelka Thiago, waxaanu yidhi: “Waxaan qorshaha kooxda la falanqayn doonaa Hasan Salihamidzic. Waxaanu leenahay xidhiidh dhow. Laakiin waqtigan, diiraddayadu waxay ku kooban tahay Champions League. Sidaa darteed, ma doonayo inaan gurbiyo warar kale.”